Ry mpivarotra, ao amin'ny portfolio-nao ve ny Mobile Advertising?
Maninona ianao no tsy mampiasa finday?
Alahady, Aogositra 9, 2009 Alahady 24 aprily 2016 Adam Small
Tsia, tsy ny olona no mitondra takelaka fanaovana takelaka manodidina ny tanàna. Ny tiako holazaina dia ny fanatratra ny mpanjifa sy ny mpanjifa amin'ny alàlan'ny finday. Matetika izy io dia antsoina hoe Marketing finday saingy nahita olona maromaro niantso azy aho Fandikana finday tato ho ato. Misy karazana endrika samihafa amin'ny Marketing finday; SMS/ Marketing amin'ny hafatra an-tsoratra, pejy web optimised finday ary rindranasa finday no telo lehibe indrindra.
Na dia samy manana ny tombony sy ny fatiantoka aza ny endrika varotra finday tsirairay avy ary milaza izy rehetra fa manana taham-panavotana ambony kokoa, ny zavatra tokana momba ny marketing amin'ny finday izay tsy azo lavina dia ny fampiasana azy mitombo. Toa misy toerana mitovy amin'ny marketing amin'ny mailaka tamin'ny faramparan'ny taona 90 sy ny fiandohan'ny taona 2000, teo am-piandohana ho lasa andry lehibe amin'ny ankamaroan'ny tetikady marketing.
Efa mahita marika lehibe sy orinasa kely manentana karazana programa tsy fivadihana tafiditra amin'izany isika fandefasana hafatra an-tsoratra. Ny marika mozika lehibe dia mivarotra mozika amin'ny alàlan'ny pejin-tranonkala nohamarinina finday. Ireo orinasan-rindrambaiko dia mamoaka fandaharana natao ho an'ny finday fotsiny. Ny fandaharana amin'ny fahitalavitra dia mampiasa SMS hividianana fidiram-bola amin'ny alàlan'ny sarany fandefasan-kafatra premium amin'ny fifidianana ifotony. Ny mpanao politika dia manetsiketsika ny mpanohana amin'ny alàlan'ny fanairana finday.
Ny marketing amin'ny finday dia manana tombony roa tsy takatry ny saina noho ny mpanelanelana amin'ny doka sy marketing hafa:
Mitondra azy ireo ny telefaona findainy ny olona - noho izany ny fahatongavany ara-potoana sy ny fahazoana antoka fa tonga amin'ilay mpandray ilay hafatra dia zavatra azo antoka! (Mazava ho azy fa miaraka amin'ny andraikitra izany.)
Ny fananana mpanjifa misafidy amin'ny marketing amin'ny finday dia manome anao a fifandraisana mivantana miaraka amin'ny nomeraon-telefaona findain'izy ireo.
Ohatra iray lehibe amin'ny fampiasana an'ity haino aman-jery ity ny a paikadin'ny finday. Izahay dia manome takelaka misy zana-kazo hametahana ny fananany izay ahafahan'ny mpividy mety mandefa isa ho an'ny antsipiriany fanampiny momba ilay trano sy fitsidihana virtoaly. Mandritra izany fotoana izany dia nisafidy ny mpividy ary mahazo ny antsipiriany, ny mpiasan'ny trano sy trano koa dia ampandrenesina ny fangatahana sy ny nomeraon-telefaona mpividy mety hividianana azy! Manatsara ny kaonty sasany aza izahay miaraka amina antso am-peo voaray manokana avy amin'ny masoivoho.
Izany dia manome ny mpividy ny fampahalalana rehetra ilainy - ary koa manome ny mpiasan'ny trano fananana fitaovana hifandraisana ary mampifandray ny mpividy. Tsy mamela izany haavon'ny fifamatorana izany ny famoahana fotokopia amin'ny takelaka!
Ny fanontaniana mipetraka dia izao: inona no ataonao hanararaotana ny marketing amin'ny finday sy ny fantsona finday? Inona ireo hetsika ara-barotra amin'ny finday atombok'ilay orinasanao? Raha a ianao masoivoho marketing, ao amin'ny portfolio-nao ve ny Mobile Marketing? Tokony ho izany!
Tags: dokam-barotra findayFivarotana finday sy tablettefinday-barotrapaikady marketing amin'ny finday
Lahatsoratra 2,000 ary manomboka fotsiny izahay!
Eo ivohonao aho…
10 Aogositra 2009 amin'ny 6:07 PM
Fantatro fa nanakiana mafy an'i ChaCha ianao taloha, saingy tiako ny handresy lahatra anao fa manao zavatra mahatalanjona amin'ny Mobile Advertising izahay. Te-hanasa anao aho amin'ny webinar iray fampiantranoanay miaraka amin'ny VP an'ny Ad Sales, Greg Sterling, ary CEO an'ny 4INFO - raha ny tena izy, ny fifantohan'ilay webinar dia ny ENGAGING ny mpanjifa.
Manantena aho fa afaka manatrika!
Aug 11, 2009 amin'ny 1: 23 AM
Hevitra tsara. Heveriko fa mampatahotra olona maro ny finday, saingy tsy dia ratsy loatra izany raha miresaka amin'ny olona mety ianao.
Zavatra mahaliana ataonao amin'ny zoro trano. Tokony hojerenao ny lahatsoratr'i Darren Herman farany teo (http://bit.ly/10t0cO) eo an-toerana.
Tohizo ny asa tsara. 🙂
Aug 11, 2009 amin'ny 4: 00 AM
Aza raisina ny momba ny fanararaotana ataoko ChaCha - fantatro fa misy olona marobe talenta talenta eto. Tsikeraiko bebe kokoa ny famatsiam-bolam-bolan'ny ChaCha rehefa misy bandy toa ahy manana rakitsoratra voaporofo sy hevitra tsara hamatsiana… angamba fialonana kely io. 🙂
Hizaha ny webinar! Misaotra betsaka amin'ny fanasana. SY - ChaCha dia raisina an-tanan-droa foana amin'ny famoahana mpitsidika eto amin'ny The Marketing Technology Blog!
11 Aogositra 2009 amin'ny 6:40 PM
Great! Ary heveriko fa handray anao amin'ny lahatsoratra bilaogy vahiny aho! Jereo fa ho tonga aminao io.